Arsenal,Man U,Man City & Liverpool oo barbardhac lagu qatey, Chelsea oo badisey & – SBC
Arsenal,Man U,Man City & Liverpool oo barbardhac lagu qatey, Chelsea oo badisey &
Posted by editor on Noofember 28, 2011 Comments
Kulamo ka tirsan wareega 13-aad ee hotyaalka English Premier League-ga ayaa la ciyaaray sabtidii iyo axadii iyadoo kooxaha waa weyn badankoodu ay galeen natiijooyin barbar dhac ah sida Man United & Newcastle oo isku ag dhacay, Arsenal oo gurigeeda Fulham 1-1 ku kala tageen, Liverpool & Man City oo 1-1 ku kala caraabay, balse Chelsea & Tottenham ayaa guulo caaqibo leh helay.
Arsenal oo gurigeeda barbardhac kula gashay kooxda Fulham
Goolal labada shabaq ee Arsenal & Fulham uu ku hubsadey ciyaaryahanka daafaca uga ciyaara kooxda Arsenal & qaranka Belgium Thomas Vermaelen ayaa ka dhigay natiijo barbardhac ah kulan adag oo derby ah oo dhexmarey kooxaha Arsenal oo ka dhisan waqooyiga London & Fulham oo ka dhisan Galbeedka London.
Kulankan oo ahaa mid xiiso badan ayaa Arsenal garoonka qaaliga ah ee Emirates waxay ku soo dhaweysay kooxda Fulham, waxaana natiijada barbardhaca ah ay sii badisay sanadihii kooxda Fulham aanay ku guuleysan garoon Arsenal leedahay oo ay tagto ciyaar marti ah (Away), mudadaasi oo ah 100 sano.
Goolka uu iska dhaliyey Vermaelen daqiiqadii 65-aad wuxuu halis galin karey socodkii bad qabkaa ee ay Arsenal ku ruqaansanaysay todobaadyadii tagey, ka dib markii ay bohol ku-socod ay gashay bilowgii xili ciyaareedkan.
Taageerayaasha Arsenal, kooxda martida ah, taageerayaashooda 3-da kun ka koobnaa iyo dadka xiiseeya kubada cagta waxay isha ku hayeen kulankan xidiga ifaya ee Arsenal Robin van Persie oo laga filayey in uu ku biiriyo wax uun gool ah gool dhalintiisa caadda mareysa ee 12-ka gool uu ku dhaliyey 8- kulan, laakiin isku day kasta oo uu sameeyo waxaa si la yaab leh isaga caabinayey oo badbaadiyey goolhaha Fulham Mark Schwarzer oo ciyaartaasi la yaab badan muujiyey.
Ciyaartoydii kulankan Arsenal safatey kuma jirin hal nin oo Faransiis ah waana markii ugu horeysay mudo lixdii sano ee ugu dambeysay oo Tababare Arsene Wenger aanu ku bilaabin ciyaartoy Faransiiska u dhashay.
Afar iyo tobankii ciyaartoy ee uu u adeegsadey ciyaartaasi waxay ka soo kala jeedeen 14 wadan ama qaran oo kala duwan.
Vermaelen (Daqiiqadii 82-aad)
Vermaelen (Own Goal Daqiiqadii 65-aad)
Garoonka Emirates ee Arsenal ee lagu ciyaarayey waxaa soo xaadiray 60,043 qof.
Chelsea oo dharbaaxo ciil bax ku garaacdey kooxda wareersan ee Wolves
Chelsea oo guuldarooyin wehel u noqdotey todobaadyadii la soo dhaafay ayaa caro kula dul dhacdey kooxda jahwareersan ee Wolves ka dib markii ay ku gaaracdey 3-0 ciyaar adag oo ka dhacdey garoonka Stamford Bridge.
Ciyaaryahanka daafaca uga ciyaara kooxda Chelsea ee ay haysato dacwada la xiriirta cunsirinimo oo uu kala kacay ciyaaryahan ka tirsan QPR John Terry ayaa goolkii furitaanka siiyey kooxda martida loo ahaa waxaana labeeyey Daniel Sturridge halka Juan Mata uu saxiixay goolkii sadexaad ee quusinta.
Tababaraha mushkiladu haysto ee aanay cadeyn mustaqbalkiisa dhanka kooxda Chelsea Andre-Villas Boas ayey guushani waxay u noqonaysaa wax uun neef ka soo bax, waxaase mudo 2 todobaad ah sugaya afar kulan oo adag oo sadex ka mid ah lagu ogaan doono natiijada Chelsea ka gali karto koobka Premier League-ga ee loo tartamayo iyo kulan kale oo ku xiran in kooxdu isaga huleesho ciyaaraha Champion League
Inkastoo Chelsea laga badiyey sadex ka mid ah shantii kulan ee ay safatey isla markaana laba kaliya ay ka guuleystey 7 kulan hadana guushani waxay wax weyn ugu fadhiyaa tababare Villas-Boas.
“Waxaan rumeysnahay inaan ku guuleysan karno horyaalka, waxaynu haysanaa ciyaartoy qaarkood horey ugu soo guuleysteen horyaalka, waxaynuna leenahay awoodaasi waana rumeysnahay ilaa aynu ka dhimano in ay nala jiri karto guushu” ayuu yiri Villas-Boas oo kulamada soo socda fooda la gali doono Newcastle & Manchester City oo Premier League-ga ka mid ah iyo Valencia oo ay wada ciyaari doonaan kulanka ugu dambeeye ee Champions League.
Tababaraha Wolves Mick McCarthy wuxuu muujiyey in uu ka niyad jabsan yahay guuldarada waxaase uu farta ku fiiqay in ciidamadiisu si wanaagsan ula ciyaareen ulana qaysadeen kubada askarta Chelsea, isla markaana ay qanciyeen taageerayooshada soo safrey.
Terry (Daqiiqadii 7-aad)
Sturridge (Daqiiqadii 29-aad)
Mata (Daqiiqadii 45-aad)
Garoonka Stamford Bridge ee kooxda Chelsea ee lagu kulmay waxaa soo xaadiray 41,648 qof.
Newcastle oo 1-1 ku celisay Man United oo baacsanayasa Man City
Manchester United ayaa lagaga nixiyey natiijo barbardhac ah oo ay gurigeeda Old Trafford kula gashay 10 nin Newcastle ah oo ka faa’ideysay rigoore muran ku jiro oo loo dhigay qaybtii dambe ee ciyaarta.
Weeraryahanka reer Mexico Javier Hernandez oo dhaliyey goolka furitaanka ee kooxda Man United wuxuu ahaa goolkiisii lixaad ee xili ciyaareedkan Premeir League, balse waa goolkiisii ugu horeeyey ee uu ku dhaliyo Old Trafford koobkan socda.
Newcastle oo todobaadkii hore dhulka ay la soo dhacdey kooxda boorsooyinka lacagta la daala dhacaysa ee Man City waxay raadinaysay inay meesha ka saarto mudo 39 sano ah oo aanay guul kala tagin guriga Man United ee Old Trafford , laakiin waxaa rajo soo gashay ciyaarta qaybtii labaad 15 daqiiqo ka dib markii goolka laga dhaliyey rigoore ay ku heleen goosha Man United iyadoo ciyaaryahanka Rio Ferdinand si aan cadeyn mid ka mid ah calanwadayaasha uu sheegay in uu legday Hatem Ben Arfa, sidaasina gool ku laadkii uu ku dhaliyey weeraryahanka Muslimka ah ee asalkiisu ka soo jeedo dalka Senigal balse haysta dhalashada Faransiiska Demba Ba oo goolkaasi uu ka dhigay 9 goolasha uu dhaliyey xili ciyaareedka Premier League.
Inkastoo Newcastle Gutierrez uu ka qaatey kaarka cas hadana waxay muujiyeen fara adag ay si ba’an isaga difaaceen weerarada ka imaanay ciidamada Sir Alex, waxaana la oran karaa goolhayahooda Tim Krul ayuu ahaa ninkii u suuragaliyey inay dhibic qiimo weyn ugu fadhida ay kala tagaan garoonka ay martida u ahaayeen, ka dib markii uu si la yaab leh u badbaadiyey kubado ka imaanayey ciyaaryahanada Ashley Young, Evra, Hernandez & kubada madaxa ah oo soo teesteeyey Nemanja Vidic,
Ciyaartoyda Man United oo muran kula jira garsooraha & calanwadaha
Tababaraha Man United Sir Alex Ferguson fadhiga waa lagu celin waayey intii ciyaartu socotey waxaana la ahaan weyday goolka laga soo bareejiyey iyo waliba natiijada ay ku yeelan karto dhibacaha ay ka horeyso kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihiin kooxdiisa ee Man City.
Sir Alex oo saxaafada la hadley ka dib ciyaarta wuxuu si ba’an u weeraray calanwadaha ka dhaadhiciyey garsooraha in rigoorada loo dhigo Newcastle waxaana uu ku tilmaamay nin aan ciyaarta la socon oo arin kale ku mashuuqlsanaa.
Laakiin Alan Pardew tababaraha Newcastle wuxuu muujiyey in dhibacda ay ka heleen kulanka Man United ay aheyd mid ay istaahileen oo ay muujiyeen ciyaar wanaag aad u adag.
Goolka Man United
Hernandez (Daqiiqadii 49-aad)
Ba (Gool ku laad daqiiqadii 64-aad)
Garoonka Old Trafford ee Man United ee lagu dagaalamey waxaa soo xaadiray 75,594 qof.
Tottenham oo kaalinta sadexaad baneysatey ka dib markii ay jiirtey West Bromwich
Laba goo loo caaqibo leh oo uu dhaliyey ciyaaryahanka Emmanuel Adebayor & mid kale oo ku sadexeeyey Jermain Defoe ayaa guul wax ku ool ah siiyey kooxda Tottenham ee ka dhisan Galbeedka London taasi oo ay ka gaartey kooxda West Bromwich.
Tottenham oo marti u aheyd West Bromwich waxaa lagaga naxsadey gool soo dhaweyn ah oo uu ka dhaliyey ciyaaryahanka Youssouf Mulumbu laakiin kooxda lagu naaneysto The Spurs waxaa rajada ku soo celiyey 15 daqiiqo ka dib ciyaaryahanka Adebayor iyadoo qaybtii hore lagu kala nastey 1-1.
Laakiin qaybtii dambe kooxda martida ah ee Tottenham waxay la soo baxdey wacdaro gool raadis ah laakiin West Bromwich aad ayey isku adkeysay waxaana geesteeda ay ka wadey weeraro adag, iyadoo dhawr jeer la kulantey dhibaato xaga garsoorka ah oo gool laga diidey, rigoore ay dalbadeen iyo waliba rigoore laga dhigay.
Inkastoo Tottenham ay ka maqnaayeen ciyaaryahano muhiim ah Rafael van der Vaart oo dhaawac muruqah ah qabey iyo Luka Modric oo xanuun la ildarnaa hadana uma dhutin laacibiintaasi ka maqnaa.
Sadexda gool ee Tottenham ee laba ka mid ah uu dhaliyey Adebayor waxay ka dhigan yihiin 7 gool oo xili ciyaareedkan Premier League-ga oo kaliya uu dhaliyo, rigoorada laga qabtey balse uu ku celiyey oo uu dhaliyey waa tii ugu horeysay ee iska khasaarin gaaro, waxaana uu dhaliyey intii ka ciyaarayey Premier League-ga lix gool ku laad.
Goolka West Bromwich
Mulumbu (Daqiiqadii 10-aad)
Adebayor (Daqiiqadii 25-aad)
Defoe (Daqiiqadii 81-aad
Adebayor (Daqiiqadii 90+3)
Garoonka The Hawthorns ee kooxda West Bromwich waxaa soo xaadiray 24,801 qof.
Man City & Liverpool oo isku ag dhacay kulan adag oo ka dhacay garoonka Infield
Gool uu iska dhaliyey Joleon Lescott ayaa meesha ka saarey gool caaqibo leh oo madaxa uu ku dhaliyey ciyaaryahanka daafaca uga ciyaara Man City Vincent Kompany, iyadoo Manchester City doonaysay in ay guul kala tagto garoonka Liverpool ee Anfield oo sideedii ciyaarood ee ugu dambeeyey ay lix mar guuldaro kala tagtey labana ay barbar dhac ka heshay.
Tababaraha Manchester City Roberto Mancini oo ay shaley ku beegneyd dhalashadiisii oo ay u buuxsantey sanadkii 47-aad, wuxuu raadinay guul uu ku dheeraysan karo hogaaminta horyaalka ka dib markii Newcastle sabtidii ay Man United barbar dhac ku qabtey.
Ciyaaryahanada Man City waxay mudo la wareegeen awooda iyo maamulka ciyaarta iyagoo garoonka Anfield sidii ay doonaan ugu cararay taasi oo keentey goolka madaxa uu ku dhaliyey Kompany, balse isla daqiiqado ka dib waxaa kubad uu soo laadey kubad qaabeeyaha khadka dhexe ee kooxda Liverpool Adam isagoo isku dayeya in uu difaaco goolkiisa ku hubsadey Joleon Lescott.
Laakiin Liverpool oo qaybtii dambe ee ciyaarta la soo baxdey kubad isku dhiidhiib ah iyadoo wacdaro u shiday kooxda martida u aheyd, waxaana tababare Mancini uu sameeyey badalo kala duwan oo uu ku doonayey in uu kula wareego guusha ciyaarta isagoo badal ku soo galiyey garoonka weeraryahanka Mario Balotelli balse 17 daqiiqo gudahood ayuu ku qaatey laba kaarka hurdiga isagoo garoonka uga baxay markii loo sii raaciyey kaarka cas.
Markii uu ay noqdeen 10 ciyaartoyda Man City, Liverpool oo ay taageerayaan taageerayasheedu waxay isku hawleen inay ka faa’ideystey fursadaasi balse jilibka waxaa u aasay weerar kasta iyo kubad kasta oo ka timaada weeraryahanada iyo ciyaartoyda Liverpool goolhayaha Man City Joe Hart oo la oran karo wuxuu ahaa badbaadiyaha dhibicda ay la hoydeen wiilasha Robert Mancini.
Kaarka cas ee uu qaatey Balotelli waa kiisii sadexaad tan iyo markii uu kooxda Man City uga soo biirey dhanka kooxda Inter ee reer Talyaani.
Liverpool todobo kulan oo ay ku ciytaartey gurigeeda laba kulan oo kaliya ayey badis gaartey.
Lescott (Gool uu iska dhaliyey daqiiqadii 33-aad)
Goolka Manchester City (Kompany daqiiqadii 31-aad)
Garoonka Anfield ee kooxda Liverpool ee lagu kulmay waxaa soo xaadiray 45,071 qof.
Kulamada kale ee sabtidii & Axadii
Stoke City 3-1 Blackburn Rovers
Swensea 0-0 Aston Villa
Van Persie === Arsenal 13 gool
Aguero === Man Ciry 10 gool
Dzeko === Man City 10 gool
Ba === Newcastle 9 gool
Rooney === Man United 9 gool
Adebayor === Tottenham 7 gool
1 Man City 13 31 35
2 Man Utd 13 17 30
3 Tottenham 12 10 28
4 Newcastle 13 7 26
5 Chelsea 13 11 25
6 Liverpool 13 5 23
7 Arsenal 13 3 23
8 Aston Villa 13 -1 16
9 Everton 12 -1 16
10 Norwich 13 -2 16
11 QPR 13 -10 15
12 Stoke 13 -10 15
13 Swansea 13 -4 14
14 West Brom 13 -8 14
18 Bolton 13 -12 9
19 Wigan 13 -12 9
20 Blackburn 13 -13 7